Ny lahatsoratr'i Virginia Jacko momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Virginia Jacko
Virginia Jacko dia filoham-pirenena sady CEO an'ny Lighthouse any Miami ho an'ny jamba sy ny tsy fahitana ara-pahitana izay manova ny fiainan'ny olona 75,000 isan-taona amin'ny fampisehoana azy ireo ny fomba azo atao mba hahitana tsy fahitana.
Tsy ny olon-drehetra no afaka mahita ny tranonkalanao
Alakamisy, Aprily 25, 2019 Alakamisy, Aprily 25, 2019 Virginia Jacko
Ho an'ny mpitantana tranokala amin'ny orinasa marobe, lehibe na kely, ity vanim-potoana lasa ity dia ny ririnin'ny tsy fahafaliany. Nanomboka tamin'ny volana desambra, galeriana zavakanto am-polony tao amin'ny tanànan'i New York no voatondron'ny fanenjehana, ary tsy irery ireo galeria. Didy aman-jatony maro no napetraka tato ho ato amin'ireo orinasa, andrim-panjakana ara-kolotsaina, vondrona mpiaro ary koa ilay tranga pop Beyoncé, izay nomena ny anarany ny tranokalan'izy ireo tamin'ny raharaha fitoriana natao tamin'ny volana Janoary. Ny faharefoana iraisan'izy ireo? Tsy ireo tranonkala ireo